I-Cottage Encane - I-Airbnb
506 okushiwo abanye
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Myranda
Mina nomyeni wami siklame leli kotishi elihle elincane ukuze uzizwe njengekhaya lakho kude nasekhaya. Nakuba ingaphandle lihle futhi lithandeka ngaphakathi kuyisimanje futhi kuthokomele. Sihlonyiswe ngakho konke okudingayo ukuze uhlale unethezekile sithemba ukuthi uzokhetha indawo yethu yokuhlala ngenkathi use-Little Rock.
Singabathwebuli bezithombe zomshado futhi siyathanda ukuhamba futhi sichithe isikhathi nomndeni nabangane. Njengoba ukusingathwa kuyinto esihlale siyijabulela siklame leli khaya elincane ukuze sikwazi manje ukwenza isikhathi esigcwele.
Leli cottage elincane elihle lisetshenziswa ukuba libe igaraji lethu elizimele. Lapho siba nabantu abaningi kulapho saqaphela nakakhulu ukuthi sifuna indawo ezinikele nenethezekile ukuze isivakashi sethu sihlale. Ngakho-ke ngokuhlela okuthile kanye nokujuluka kokulingana siklame lesi sikhala esincane ukuze sibe nakho konke umuntu angakudinga ukuze uhlale uphumule futhi ungokoqobo. Mina nomyeni wami siyakuthanda ukwakha nokuklama ngakho kube yinqubo ejabulisayo ukubuka le ndawo iphila futhi manje sabelane ngayo nabantu abahamba kuzo zonke izindawo.
4.99 · 506 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-506
Sitholakala esifundeni esihle se-Central High Historic. Yindawo ehlala edolobheni ehlanganiswe nezindlu ezinhle ezivuselelwe kabusha kanye nobuhle bomlando. Ubuningi babantu bomakhelwane bethu buhlukile kakhulu. Phakathi nebanga lokuhamba kukhona amakhaya ayingxenye yesigidi futhi angaphansi kwamamayela ayi-1.5 kunezindlu ezinhle zomlando, kodwa endaweni efanayo uzothola amakhaya asagcwele futhi alungele uthando oluthile.
Mina nomyeni wami salungisa kabusha ikhaya lethu le-English Tudor lango-1920s ngo-2019 futhi sesithandana ngokuphelele nalesi sifunda kanye nomakhelwane bethu abanobungane. Cishe sikuhambo lwemizuzu emi-3 ukusuka eCentral High, imizuzu eyi-10 ukusuka esikhumulweni sezindiza, kanye nohambo lwemizuzu emi-4 ukusuka edolobheni.
Le ndawo ilungele ukuthatha umdlwane wakho omnandi lapho uzihambela ekuseni noma kusihlwa. Sithanda ukuncoma ukuyisa i-Summit ku-Daisy Bates bese sihamba ngezinyawo ezindaweni ezinhle ze-Central High.
Imidlwane nayo yamukelekile ukuthi ihlole igceke lethu elingemuva nasemaceleni inqobo nje uma licoshwa ngemuva.
Ngicela ungithumelele umyalezo uma kukhona okudingayo.